Shiinaha Automatic Debecsan Endoscope Wasakhda Soosaaraha Soo-saare iyo Soo-saare | Shinva
Jeermiska Qalabka Fudud ee Qalabaynta Qalabaynta ee otomaatiga ah
Automatic Flexible Endoscope Washer-disinfector waxaa loogu talagalay iyadoo lagu saleynayo heerka caadiga ah ee loo yaqaan 'ISO15883-4' kaas oo si gaar ah loogu isticmaalo dhaqida iyo jeermiska jirka ee Flexible Endoscope.
Dhaqida waxtarka sare
Rider taxane wasakhda otomaatigga ah ee otomaatigga ah waxay ku dhammayn kartaa dhammaan nidaamka dhaqidda iyo jeermiska hal xabbad oo endoscope dabacsan 15 daqiiqo gudahood, taasoo si weyn u wanaajinaysa waxtarka wareegga endoscopes.
Naqshadeynta ilaalinta Endoscope
Function Shaqada baaritaanka baxsiga
Baaritaanka dheecaanka Endoscope waa la dhammeeyaa ka hor inta aan lala xiriirin dareeraha qolka ku jira, wuxuuna sameyn karaa baaritaan joogto ah inta lagu jiro wareegga. Marka qiimaha baxsiga la ogaado uu ka bato qiimaha la oggol yahay ee la oggol yahay, nidaamku wuxuu soo saari doonaa calaamadda digniinta ee muuqaalka iyo maqalka ah, isla markaana si otomaatig ah ayuu u joojiyaa wareegga
Nidaamka raadraaca nidaamka
Hawsha daabacaadda xogta
Daabacaduhu wuu daabacan karaa xogta habka dhaqida iyo jeermiska jeermiska jirka ee 'endoscope' kasta, taasoo u sahleysa dadka isticmaala inay diiwaan geliyaan.
■ Nidaamka maaraynta xogta.
Nidaamku wuxuu ururin karaa macluumaadka hawlwadeennada endoscope iyo xogta habka dhaqidda iyo jeermiska ayaa isku xiri kara nidaamka kombuyuutarka maareynta isticmaaleyaasha iyada oo loo marayo shabakad, taas oo si fudud u heli karta isku xirnaanta maareynta macluumaadka bukaanka iyo endoscope maydhashada iyo macluumaadka jeermiska.
Shaqada is-dila jeermiska
■ Markaad dhamaysato dayactirka, dayactirka ama hakinta mashiinka, waa inuu sameeyaa barnaamij isdifaaca.
Function Shaqada is-jeermiska ayaa si fiican u nadiifin karta qolka mashiinka iyo dhuumaha, oo ay ku jiraan miiraha 0.1um, si looga hortago in mashiinka-jeermis-dilaha uu noqdo isha wasakhda.
100% Dhaqida iyo jeermiska jeermiska
■ Dhammaan, wareega dhuumaha buuxa iyo jeermiska jeermiska
Qolka dharka lagu dhaqo oo leh qalab lagu buufiyo buufinta iyo gacanta buufinta ee wareejisa taas oo ka dhigi karta dhaqida iyo jeermiska dusha sare ee endoscope, halka biyaha wareegayaa ay sameyn karaan dhaqitaan joogto ah iyo jeermis dhammaan dhuunta gudaha ee endoscope.
Pump Bamka xoojiya cadaadiska luminta ee Endoscope
Iyada oo leh bamka xoojiya ee lumen endoscope madaxbanaan, ayaa si joogto ah u samayn kara dhaqida iyo jeermiska, gaaska ama duriinka biyaha oo sameeya biopsy ama nuuga lumen, si looga hortago samaysanka biofilm bakteeriyada.
Rising Biyo shaandhaynaya oo kacaya
Jeermiska jeermiska ka dib, waxay ku biyo raaci doontaa endoscope-ka biyo lagu sifeeyo miiraha 0.1um si looga fogaado faddarada labaad ee biyaha soo kordhaya ee aan nadiifka ahayn.
Function Shaqaynta qalajinta
Hawsha qalajinta waxay xaqiijin kartaa qalajinta lumen gudaha endoscope oo leh laba nooc, qalajinta hawada iyo qallajinta aalkolada.
Ilaalin ku habboon wadaha
Door Albaabka otomaatiga ah, beddelka lugta lugta
Sawir albaabka muraayadda otomaatigga ah, oo sahlan in la ilaaliyo xaaladda maydhashada iyo jeermiska jeermiska; bedelka lugta lugta, albaabka waa lagu furi karaa adigoo si tartiib ah u laadaya bedelka lugta.
Si buuxda u lifaaqan
Taxane Rider automatic endoscope dhaqe-jeermiska waxaa loogu talagalay qaab dhismeedka si buuxda u lifaaqan. albaabbada muraayadda otomaatigga ah si adag ayey u cadaadin doonaan albaabka xirxirashada goomaha, si looga hortago urta jeermiska iyo ilaalinta ugu badnaan caafimaadka hawlwadeenka.
■ Waxyaabaha kiimikada lagu daro oo otomaatig ah ayaa lagu daray
Inta lagu guda jiro dhaqida iyo jeermiska jeermiska, waxyaabaha lagu daro kiimikada, sida enzymes, aalkolo iyo jeermis dileyaasha ayaa la qiyaasi karaa oo si otomaatig ah loogu dari karaa.
Function Shaqada muunad qaadista otomaatiga ah ee jeermiska lagu dilo
Taxanaha Rider B oo ku qalabeysan aaladda sambal qaadista otomaatigga ah oo ku habboon dadka isticmaala si ay ula socdaan uruurinta jeermiska iyo ilaalinta nabadgelyada wadaha.
Function Shaqada isku darka iyo dheecaanka otomaatiga ah ee jeermiska disha
Taxanaha Rider B wuxuu ku qalabeeyaa isku-darka otomaatiga ah ee u shaqeeya iyo dheecaanka. Markaad kudareyso jeermiska, kaliya ku shub jeermiska qolka qolka dharka lagu dhaqo oo bilow barnaamij ku darida jeermiska. Markaad dheecaan bixisid, kaliya bilow barnaamijka dheecaanka jeermiska.
Hore: XH507 Qaybta Ilkaha
Xiga: Albaabka Tooska ah ee Buufiyo Mashiinka